ဆတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆတ်၌ တင့်တယ်ကြီးမားသော ဦးချိုများရှိသည်။ အသား အတွက်၎င်း၊ ဦးချိုအတွက်၎င်း လူတို့သည် ဆတ်များကို လိုက် လံပစ်ခတ်တတ်ကြသည်၊ ဆတ်ချိုကို အိမ်တွင်းအလှအပ ပစ္စည်း အဖြစ်ဖြင့် ထားလေ့ရှိကြ၏။ ဆတ်ချိုနုသည်ကား ဆေးဘက် ဝင်၏။ ဆတ်သည် ကိုယ်ထည်ကြီးမားသည်။ ပျမ်းမျှခြင်းအား ဖြင့် အမြင့် ၅၅ လက်မရှိသည်။ ပခုံးမှတိုင်းလျှင် ၅ ပေမျှမြင့် သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးဆတ်တစ်ကောင်သည် ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၅ဝဝ မှ ၇ဝဝ အထိရှိတတ်သည်။ အရှည်ဆုံး ဦးချိုမှာ အလျား လက်မ ၅ဝ ကျော်ကျော်မျှ ရှိတတ်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ကျွန်းဆွယ်ရှိ ဆတ်ချိုများသည် ဘေးသို့မကားဘဲ၊ ကျဉ်းသည်။ အဖုအထစ်များ ပို၍ပါရှိသည်။ တောင့်လည်းတောင့်တင်းသည်။ အများအားဖြင့် ၂၆ လက်မခန့် အလျားရှိသည်။ ဆတ်သည် အာရှအရှေ့ပိုင်းရှိ သမင်မျိုးဖြစ်သည်။
ဆတ်၏အရေသည်ကြမ်း၏။ အမွေးများလည်း ကြမ်း သည်။ ဆတ်ထီး၌လည်ပင်းနှင့်လည်တိုင်တို့တွင်လည်ဆံမွေး များရှိသည်။ ပူသောရာသီဥတုတွင်အမွေးများကျွတ်ကုန်တတ် သည်။ အမွေး၏အရောင်သည်အများအားဖြင့်အညိုရောင်တွင် အဝါရောင် သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင် ရောလျက်ရှိတတ်သည်။ အတွင်းဘက်အမွေးများသည် ပို၍အရောင်ဖျော့သည်။ ဆတ်မ များ၏အရောင်မှာ ပို၍ဖျော့သည်။ အသက်ကြီးသောဆတ်ထီး များ၏ အမွေးသည် ရင့်ယော်လာသောအခါ တဖြည်းဖြည်း မည်းနက်လုနီးပါးမျှ အရောင်ပြောင်းလာတတ်သည်။
ဆတ်ချိုသည် တောင့်တင်း၍ အဖုအထစ်များပါရှိသည်။ ချိုရင်းအဆုံးတွင် ချိုတိုင်သည်ခက်ရင်းခွကဲ့သို့နှစ်ခွကွဲသွား သည်။ အရှည်မှာ ညီတူညီမျှဖြစ်သည်။ အချို့ဆတ်ချိုတွင် အပြင်ဘက်ချိုခွသည် ပို၍ရှည်တတ် ပြီးလျှင် အချို့ဆတ်ချိုတွင် မူ၊ အတွင်းချိုခွသည် ပို၍ရှည်တတ်သည်။ လေးနှစ်သားရှိသော အခါ ဆတ်၌ ချို စုံစုံလင်လင် ပေါက်လာသည်။
ဆတ်များကို အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အပြင် သီရိလင်္ကာ ၊ မလေးရှားကျွန်းဆွယ်တစ်လျှောက်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစု အလွန်အထိ သစ်တောရှိသော နေရာများတွင် တွေ့နိုင်၏။ ဆတ်သည် သစ်တောထူထပ်သော တောင်စောင်းများတွင် နေတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးခင်းများ အနီးတွင်နေရန် နှစ်သက်သည်။ ဆတ်၏အစာမှာမြက်၊သစ်ရွက်၊ သစ်သီးနှင့် သစ်ခက်နုများဖြစ်သည်။ ညအချိန်တွင်အစာကိုလိုက်လံ၍ရှာဖွေ စားသောက်လေ့ရှိ၍၊ နေ့အချိန်တွင်ချုံကောင်းသောနေရာများ၌ ပုန်း အောင်းနေတတ်သည်။ နေဝင်ရီတရောအချိန်သို့ မရောက် သရွေ့ ပုန်းအောင်းနေရာမှ ထွက်မလာတတ်ချေ။ ဆတ်၏အမြင် သည် သင့်တော်ရုံမျှသာ ကောင်းသော်လည်း၊အနံ့နှင့် အကြား အာရုံတို့မှာမူ ထက်မြက်ပေသည်။ ဆတ်သည်ကိုယ်ကြီးမား သော်လည်း၊ ချုံထူထပ်သောတောများအတွင်း၌ အသံမမြည်စေ ဘဲ သွားလာနိုင်ခြင်းသည် အံ့ဩစရာကောင်းပေသည်။ ဆတ်သည် ရေရှိရာအရပ်ကို ကြိုက်သည်။ ရေကူးသောအခါ ကိုယ်ကိုရေထဲ ၌ မြှုပ်ထားပြီးလျှင် ချိုနှင့် မျက်နှာကိုသာ ရေပေါ်၌ ဖော်ထား သည်။ အချို့ဆတ်ထီးများသည် ဦးချိုများ ကို အသစ်လဲတတ် ကြသည်။ ဦးချိုဟောင်းများ ကျွတ်သွားသောအခါ ချိုသစ်များ ပေါက်လာသည်။ ထိုချိုနုများအပေါ်တွင် ကတ္တီပါကဲ့သို့သော အမွေးနုများရှိသည်။ နောင်အခါတွင် ထိုအမွေးနုများသည် တစ်ဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွား၏။ ဆတ်ထီးတို့သည် မိမိ နေထိုင်ရာ လျှိုမြောင်ဒေသသို့ အခြားဆတ်ထီးများကို ဝင်ခွင့် မပေးလိုကြချေ။ မိမိပိုင်ဆိုင်ရာ ဒေသကိုမှီ၍ တစ်ကောင်နှင့် တစ်ကောင် တိုက်ခိုက်တတ်သည်။
ဆတ်ထီးတစ်ကောင်၏ ပိုင်နက်တွင်းသို့ ဆတ်မများ ဝင် ရောက်လာသည့်အခါ၌မူကား တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိချေ။ သို့သော် ဝင်လာသောဆတ်မသည် ဆတ်ထီး၏မိတ်ဖြစ်ရလေတော့သည်။ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလသည် ဆတ်တို့၏ မိတ်လိုက်ချိန်ဖြစ် သည်။ ထိုအချိန်သည် ကုန်လွန်သောအခါ ဆတ်ထီးများ ထွက် ခွာသွားကြသည်။ မိတ်လိုက်ရာသီသို့ တစ်ဖန်ပြန်ရောက်သည့် တိုင်အောင် တစ်ကောင်တည်းနေထိုင်တတ်ကြသည်။ မိုးဦးကျ မေလနောက်ပိုင်း သို့မဟုတ် ဇွန်လအစပိုင်းလောက်တွင် ဆတ် ကလေးများ မွေးတတ်သည်။ ဆတ်ထီးကလေးများသည် မိခင် ဆတ်မများနှင့်သာ အတူနေထိုင်လေ့ရှိကြသည်။ ကောင်ရေ အမြောက်အမြားနှင့် စုဝေးနေထိုင်သော ဆတ်များကို တွေ့ရခဲ သည်။ လေးငါးကောင်မှ ဆယ့်နှစ်ကောင်အထိသာ တွေ့ရလေ့ ရှိသည်။ ဆတ်ထီးကို၎င်း၊ ဆတ်မကို၎င်း၊ တစ်ကောင်ထီးတည်း လည်းတွေ့နိုင်သည်။ ဆတ်ထီးတစ်ကောင်မျှမပါဘဲ၊ ဆတ်မများ နှင့် ဆတ်ကလေးများ အုပ်ဖွဲ့၍နေသည်ကိုလည်း တွေ့နိုင်၏။
↑ Timmins, R.J., Steinmetz, R., Sagar Baral, H., Samba Kumar, N., Duckworth, J.W., Anwarul Islam, Md., Giman, B., Hedges, S., Lynam, A.J., Fellowes, J., Chan, B.P.L. & Evans. (2008). Rusa unicolor. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 12 December 2010.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆတ်&oldid=710368" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။